Inkunkuma elahliweyo yoBuso beMaski, iTyhubhu yentsholongwane, isampulu yeTyhubhu-iLimeng
I-Shandong Limeng Inkampani yezoMayeza yasekwa ngo-1993, ngoku sele inecandelo lamayeza esiTshayina, ukutya kokhathalelo lwempilo, umasifundisane wokuvelisa izinto zokuthambisa, izixhobo zonyango kunye neworkshop. isatifikethi sikamasifundisane sokucoca Inkampani ibisoloko ibambelela kumgaqo wophuhliso wokuziqhelanisa nobuchwephesha obuphezulu, kunye nentsebenziswano kwishishini-eyunivesithi nakwezophando. Inelinye iqela le-R & D eliqeqeshiweyo, umqolo wobuchwephesha kunye neengcali. Inkampani izabalazela ukwenza isicwangciso sophawu, kwaye uphawu "iLimeng" lanikezelwa njengoPhawu loRhwebo oluDumileyo lukaMasipala waseJinan ngo-2012.
Inkampani ibisoloko ibambelela kumgaqo wophuhliso wokuziqhelanisa nobuchwephesha obuphezulu, kunye nentsebenziswano kwishishini-eyunivesithi nakwezophando.
Ulwazi lweR & D
Injineli eyi-R & D efanelekileyo iya kuba khona ukulungiselela inkonzo yakho yokubonisana kwaye siya kuzama konke okusemandleni ethu ukufezekisa iimfuno zakho.
Izisombululo zethu zinemigangatho yokuvunywa kukazwelonke yamava, izinto ezisemgangathweni zepremiyamu, ixabiso elifikelelekayo ...
Okwangoku inkampani inezinto zonyango kunye nezixhobo zokusebenzela ezingaphezu kwe-2,000 yeemitha zesikwere, indawo yokusebenzela yokhathalelo lwempilo esemgangathweni yeemitha zesikwere ezingama-10,000, kwaye iifom zedosi zibandakanya iifomsile, ithebhulethi, igranules kunye nomgubo njl.
102020 / Okthobha
Shandong Limeng ibibanjelwe kumsitho wesebe elitsha lomzi-mveliso
Ngo-Matshi 6, 2019, Shandong Limeng ibibanjelwe kumsitho wesebe elitsha lomzi-mveliso. Abalingani beLimeng nabo bathathe inxaxheba kulo msitho. Ukuze wandise imveliso yenkampani kwaye ityebise ngakumbi iiprojekthi, iLimeng Pharm ityale i-1.2 yezigidi zeepawundi ukuthenga umhlaba weehektare ezili-10. Isebe elitsha lefektri ...
NgoJulayi 28, 2020, isebe elifanelekileyo leShandong Provincial Food and Drug Administration lagunyazisa iqumrhu lesithathu lovavanyo, i-SGS, ukuba iphinde yavavanya inkqubo yolawulo lomgangatho weLimeng, esekwe kwinkqubo yolawulo lwe-HACCP yamazwe aphesheya. Iiprojekthi zezincedisi zokutya, dai ...
Ukulwa nobhubhane kunye
Ngobusuku bangaphambi komnyhadala waseTshayina weNtwasahlobo, i-COVID-19 isasazeke ngogonyamelo. Esi sifo sichaphazele wonke umntu siye sabangela ingozi enkulu kwizigidi zabantu. Ukusukela oko kuqhambuka, i-Shandong Limeng Pharmaceutical Co., Ltd. ibisenza konke okusemandleni ukuvelisa kunye ...